Zeziphi iitekhnoloji abathengisi beC-Level batyala imali kuzo? | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 22, 2016 Douglas Karr
Umnyama Ink wenza Inqanaba le-C yoFundo lweNtengiso ka-2016Ukuphonononga abathengisi abavela kwiinkampani eziphezulu ezingama-2000 e-United States ngeniso yonyaka kunye nohlahlo lwabiwo-mali lokuthengisa oluyi-5 yeebhiliyoni zeedola kwimisebenzi nakwiindleko.
Khuphela uPhando lweNqanaba le-C lweNqanaba le-2016 leNkqoyi
Izifundo eziphambili kuFundo lweNki emnyama
Izinto eziphambili ngokubaluleka kubathengisi kukuqhubela phambili ukubaluleka kwegama kunye nokugxininiswa kwabathengi okuya kufuna ukuphuculwa okumandla kwezixhobo zeTekhnoloji yeNtengiso kunye namandla e-omni-channel.
Ukufikelela phambili kubahlalutyi ukwenza izigqibo ezikrelekrele”Sesona sithintelo sikhulu ekuphumeleleni kwibhodi yonke.
Ukwakhiwa kobudlelwane phakathi kweSebe / kwisebe kubalulekile kwimpumelelo yexesha elizayo, nangona ingakhathalelwanga njengeyona nto iphambili ngo-2016.
Ngokubanzi, abathengisi banokukhetha ukutyala imali kugcino lwabathengi kunye neenzame zokuthengisa, endaweni yokufumana abathengi.
Abathengisi bayazithemba ngokunika ingxelo yokuphumelela kwephulo kodwa bayasokola ukuhambisa iimfuno zentengiso kwi-C-suite nakulawulo oluphezulu.
Iindidi ezi-3 eziphezulu zeMartech ezinokuthi zithengwe ngo-2016 zezi Ubukrelekrele kwishishini, YokuThengisa, yaye Ukusebenzisana kwabaThengi Isisombululo sesoftware.
Kuyandonwabisa kum ukuba abathengisi bafikelele ekuqondeni ukuba yonke imiba yamava abathengi inefuthe kugcino, kodwa ayisebenzi ukuvala umsantsa kunye namanye amasebe. Andiqinisekanga ukuba uyiphucula njani imizamo yakho yokufumana kunye nokugcina ngaphandle kokusebenza ngokusondeleyo nentengiso, imveliso, inkonzo, kunye namasebe akhoyo ngosuku nakwiminyaka apho igama lakho lisesidlangalaleni kwaye lifikeleleka kwi-Intanethi kuye wonke umntu. Izithintelo kwimpumelelo kwizixhobo, izixhobo, kunye nobunkokeli zichaziwe kwiziphumo… kodwa uziphucula njani ezo ngaphandle kokunxibelelana nophawu kwaye uqinisekise impumelelo yayo kumasango?
Ukusuka kwindawo yezixhobo, iTekhnoloji yokuThengisa yingqokelela yamawaka ezisombululo. Abadlali abakhulu abanjengoSalesforce, iMicrosoft, iOracle, iSAP kunye neAdobe bayaqhubeka nokuthenga amaqonga amancinci alungisa imiba ye-niche- kodwa akukho mathandabuzo okuba eli shishini linobunzima kunye neetoni zezixhobo kunye nokugqagqana. Ndinoluvo lokuba akukho kuninzi kokungqamana kwizitokhwe zentengiso phakathi kwezi nkampani zingaphandle kwabo badlali baphambili.
I-Black Ink ROI yeC-level yeC-2016 yoFundo lweNtengiso iqaqambisa ezinye zeendlela zentengiso ngokubanzi ezichaphazela ezi nkampani zehlabathi, kodwa kunye nokuhluka okwahlukileyo phakathi kweenkcubeko zenkampani, ukhetho lohlahlo-lwabiwo mali, imiceli mngeni kunye namathuba.
Sisebenza neenkampani ezinkulu kakhulu kunye nokuqala okuncinci kwaye andiqinisekanga ukuba umbono wahluke kakhulu phakathi kwabo. Ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali kunye nezixhobo, amashishini amancinci naphakathi asakhangela ingxelo engcono, oomatshini bokuzenzekelayo ukwandisa izixhobo, kunye neenkqubo zokwandisa amava abathengi. Ubuncinci sonke sinento efanayo!
Malunga ne-Ink Enkulu ye-ROI
I-Black Ink ROI isekwe kwi-SaaS esekwe, iqonga eliphambili lokuhlalutya abathengi, ukuthengisa kunye neenkokheli ze-P & L ukuphucula ukufunyanwa kwabathengi, ukugcinwa kunye nokwandiswa kwamathuba okukhula.
tags: zodakaUhlalutyoinki emnyamaukufaneleka kwegamabusiness intelligenceukusebenzisana kwabathengiUbungakanani babathengiukuzenzekela ngokuzenzekelayoItekhnoloji yentengisomicrosoftumjelo-omniOracleukuthengisa